News Headline | Artist Khabar | Page 2
News Headline	यमबुद्धलाई आर्टिस्टहरुले सामाजिक सञ्जालमा यसरी सम्झिए	माघ, काठमाडौं । चर्चित गायक यम बुद्ध अर्थात अनिल अधिकारीको लण्डनमा भएको निधन प्रति यतिखेर सम्पुर्ण नेपाली कलाक्षेत्र शोकमा डुबेको छ । पछिल्लो चारबर्ष यता युवापुस्ता माझ निकै नै लोकप्रिय बनेका यमबुद्धले लण्डनस्थित आफ्नै घरको बाथरुममा बेल्टले पासो लगाएर आत्महत्या गरेका हुन् ।
२९ वर्षिय अधिकारी शनिबार आफ्नो बाथरुममा मृत भेटिएका थिए। यम आफ्नी पत्नी सहित लन्डनमा बस्दै आएका थिए । उत्तर लण्डनस्थित निवासमा उनले आत्महत्या गरेका परिवारका सदस्यले पुष्टी गरेका बीबीसी नेपाली समाचारले..	‘छक्का पन्जा’को पाइरेसी गरेको आरोप लागेका युवकले गरे सुसाईट नोट सहित आत्महत्या	पुस, काठमाडौं । चर्चित चलचित्र ‘छक्का पन्जा’को पाइरेसी गरेको आरोप लागेका एक युवकले आत्महत्या रेका छन् । नवलपरासी कावासोती घर भएका २५ बर्षिय कृष्ण सुवेदी नामका युवाले कानुनी कारबाहिको डरमा हतोत्साहित हुँदै आत्महत्या गरेको बताईएको छ ।
काठमाडौं ९ भिमसेनगोलको विजयचोकमा बस्दै आएका सुवेदीले बिहीबार साँझ आत्महत्या गरेका हुन् । उनले डेराको..	दिपिकाले गरीन् हलिउड चलचित्र ‘ट्रिपल एक्स’को प्रमोशन, गोल्डेन गाउनमा सेक्सी अवतार (३० तस्बिर)	पुस, एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोणले बिहिबार आफ्नो पहिलो हलिउड चलचित्रको प्रमोशन गरेकी छिन् । चलचित्र 'ट्रिपल एक्सः रिटर्न ऑफ द जेंडर केज'को हलिउड अभिनेता विन डीजल सँग मिलेर प्रमोश गरेकी हुन् ।
..	‘छक्का पञ्जा’ पाईरेसीमा, फिल्म आयो युट्युबमा (फिल्म सहित)	पुस, काठमाडौं । अहिलेसम्मकै इतिहास रच्न सफल नेपाली चलचित्र 'छक्का पञ्जा' पाईरेसीमा परेको छ । चलचित्र पाईरेसीमा परेसँगै चलचित्र निर्माण युनिट र डिजिटल साझेदार 'हाईलाइट्स नेपाल'को तुरुन्त निर्णय पछि युट्युवमा सार्वजनिक गरीएको छ ।
प्रदर्शनको सय दिन पार गरेर ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको 'छक्का पञ्जा' अन्तराष्ट्रिय रिलिजको क्रममा थियो । यतिखेर..	शंकर बिसि र पार्वती राईको नृत्यमा ‘सालघारीमा सिसौ’ (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । नेपाली लोकगीत क्षेत्रको गीतको भिडियोमा दर्शक माझ निकै रुचाइएको जोडी हो शंकर बिसी र पार्वती राई । एक समय हरेक लोकदोहोरी गीतहरुमा यो जोडी खुबै देखिन्थ्यो र केहि समयको मनमुटाव पछि यो जोडी सेलाएको पनि थियो र पछिल्लो केहि समययता पुनः यो जोडीलाई म्युजीक भिडियोहरुमा दर्शकले देख्न पाएका छन् ।
नायक च्यानिंग ट्याटमले आफ्नी श्रीमती जेना डेवनको श्यामश्वेत नग्न फोटो इन्स्टाग्राममा पोष्ट..	प्रेमको कथामा सुर्य श्रेष्ठले ल्याए ‘चोखोमाया दिँदा पनि’ (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । सर्जक सुर्य श्रेष्ठले 'चोखोमाया दिँदा पनि' बोलको एक आधुनिक गीत बजारमा ल्याएका छन् । मनु अधिकारीको स्वरमा रहेको उक्त गीत प्रेमको कथामा बनेको छ ।
सिने साईड डिजिटलले बजारमा ल्याएको भिडियोलाई सर्यु श्रेष्ठले नै निर्देशन गरेका हुन् । सुर्यकै शब्दमा रहेको सो गीतमा सनम पुरुषले संगीत भरेका छन् । यसभन्दा अघि दर्जनौं गीतहरुमा..	जाडोमा लगाउने बुटको कथा, किन आर्टिस्टको रोजाईमा छ ‘बुट’ ?	पुस, काठमाडौं । मौसम र आफ्नो पेशाअनुसार जुत्ता, चप्पल लगाउन खप्पिस युवतीहरू जाडो लागेसँगै न्यायो जुत्ता (बुट)मा आकर्षित हुन्छन् । चिसो मौसममा खुट्टालाई न्यानोपन दिन तथा स्टाइलिस्टका लागी पनि युवा युवतीको पहिलो रोजाइमा छ बुट । युरोपमा बढी फेसनमा चलेकोे बुट नेपाली बजारमा भित्रिएको करिब एक दशकमात्र भएको छ । छाटो समयमै शहरी क्षेत्रका..	मोडलिङ कस्तो हो भन्ने कुरा हेर्ने नजरमा भर पर्छः मोडल मोनिका बुढाथोकी	पुस, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने धेरै नयाँ मोडलहरु आफ्नो करियर बनाउन यसक्षेत्रमा लागेका धेरै भेटिन्छन । तर करियरको लागि यसक्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपनि यसक्षेत्रमा भविष्य छैन भन्दै मोडलिङ् क्षेत्रको सपना पनि देख्न छाडिसकेका छन् धेरैले । तर यति बेला मोडलिङ क्षेत्र छोड्नेको..	Pages:«1234567...114»